मधुमेह(चिनी रोग) ले कसरी आँखा बिगार्छ? :: a1nepal.com.np
रक्तचाप नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्छ? नियमित ब्यायाम गर्नाले आँखा पनि तेजिला हुन्छन हड्डीका समस्याका हुनुका कारण के कस्ता हुन्छन? बेजोडको टाउको दुख्ने (माइग्रेंन) भए के गर्ने? करेला खाने सहि तरिका, यस्ता छन् ८ फाइदा पेट सफा हुँदैन ? यस्तो छ सजिलो उपचार क्याल्सियम किन आवश्यक छ ? जान्नैपर्ने कुरा क्यान्सरको रोकथाम कसरी गर्ने? चुरोटको धूँवाभन्दा अगरबत्तीको धूँवा खतरनाक किन हुन्छ डाक्टरमाथि बारम्बार आक्रमण ? (सरला कट्टेलको विशेष रिपोर्ट)
← सरकारले खटाएको स्थानमा कर्मचारी जानै पर्छः प्रधानमन्त्री	क्रिकेट टोलि स्वदेश फिर्ता →